အကောင်းဆုံး Forex Trading ၏ပလက်ဖောင်းများနှင့်စနစ် | Forex Software များ - FXCC
သင်ကဦးဆောင် ECN-STP ပွဲစားတဦးကုန်သွယ်မှုသောနောက်ဆုံးပေါ်, အစွန်းဖြတ်တောက်, ပလက်ဖောင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးမျှော်လင့်ထားလိမ့်မယ်
နှင့် FXCC မှာကျွန်တော်စိတ်ပျက်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ client များအပေါငျးတို့သနှစ်သက်သော devices များပေါ်တွင် FX စျေးကွက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်; မိုဘိုင်းဖုန်း, တက်ဘလက်, Laptop,
PC များနှင့်ဝေးလံခေါင်သီသောဆာဗာသုံးပြီးမှတဆင့်။ စျေးကွက်များကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးစားပေးမိတ်ဖက် MetaQuotes ဆော့ဝဲကော်ပိုရေးရှင်းသည်ဖြစ်ပါသည်
ကမ္ဘာကျော်, ဆုရနှင့်လည်းမရှိလူကြိုက်အများဆုံး FX ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း၏ဖန်တီးသူနှင့် developer များ, MetaTrader 4.
MetaTrader4ကဒီဇိုင်းပလက်ဖောင်းတစ်စီးရီးဖြစ်ပါတယ် MetaQuotes ဆော့ဝဲကော်ပိုရေးရှင်း။ MetaQuotes ဆော့ဝဲကော်ပိုရေးရှင်း 2000 အတွက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်ခဲ့သည့် software ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းကကုမ္ပဏီတစ်ခုပြိုင်ဘက်ကင်းဂုဏ်သတင်းကိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်စျေးကွက်ကုန်သွယ်၏နယ်ပယ်သို့ဆန်းသစ်သော, အလိုလိုသိကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများတစ်စီးဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ပို့အတွက်ထူးချွန်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်။
ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်ခေတ်မီကုန်သည်များ၏အဆင့်ဆင့်ဟာ MetaTrader ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည် features နဲ့အကျိုးခံစားခွင့်များအပြည့်အဝအကွာအဝေးအသုံးချဖို့မှတဆင့်၎င်းတို့၏ကုန်သွယ်စတိုင်များနှင့်သိချင်စိတ်ကိုက်ညီဖို့ဖွံ့ဖြိုးနိုင်, စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သွဇာအောကျနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်အတော်လေးအသစ်နှင့်အတွေ့အကြုံကုန်သည်များအဘို့, ပလက်ဖောင်းမယုံနိုင်လောက်အောင်နေသောခေါင်းစဉ်: သုံးစွဲဖို့အသုံးပြုသူ, ဖော်ရွေရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူတဲ့။
သင်အသုံးပြုလိုသူပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးအပြည့်အဝအချိန်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောင်မြင်မှုအဘို့သင့်အလားအလာများနှင့်အခွင့်အလမ်းတိုးမြှင်, ဒါမှမဟုတ်စဉ်းစားရန်ရှာနေအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအချိန်ကုန်သည်ဖြစ်ကြရှိမရှိ: တစ် virtual private server သို့မဟုတ်လျှပ်စီးအမြန်နှုန်းမှာစျေးကွက်ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့ algorithmic ကုန်သွယ်နည်းစနစ်ကိုသုံး MetaTrader သင်တို့အဘို့အညာဘက်ကိုဖြေရှင်းနည်းရှိပါတယ်။ ထိုမှတပါး, FXCC မှတစ်ဆင့်သင်သည်လည်းငါတို့များကိုပေးစွမ်း ECN ကွန်ရက်မှတဆင့်ငွေဖြစ်လွယ်ပေးသူတစ်ဦးရေကူးကန်ကိုရယူသုံးနေတုန်းမရှိကုန်သည်စားပွဲပေါ်မှာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတွေနဲ့ဖြောင့်အပြောင်းအလဲနဲ့မှတဆင့်ကြုံတွေ့ရလျက်ရှိသည်။ သော interbank ကိုးကားသေချာနှင့်သင်လက်ရှိအခြေအနေများ၏စစ်မှန်သောစျေးကွက်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်ကြောင်းခံယူပြန့်နှံ့။
FXCC အောက်ပါပလက်ဖောင်းကမ်းလှမ်း: MetaTrader 4, MetaTrader4မိုဘိုင်း, MetaTrader4ပေါင်းစုံ terminal ကို နှင့် ပေးခဲ့သည် (ပေါင်းစုံအကောင့်မန်နေဂျာက).
MetaTrader4ကုန်သည်များကိုရယူသုံးနေကြနှင့်အတူ လူကြိုက်အများဆုံးထဲကတစ်ခု ကမ်ဘာပျေါတှငျ Forex ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း။ , သုတေသနနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်ဆောင်သွားရန်ရိုက်ထည့်ပါနဲ့ထွက်ပေါက်ကုန်သွယ်ရေးနှင့် Third-party automated ကုန်သွယ် software ကိုအသုံးပြုတဲ့ Expert Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ (ကွက်):, ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သောကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ဓာတ်ပြု, ပလက်ဖောင်းကုန်သည်များမှခွင့်ပြုနိုင်ရန်အတွက်အားလုံးလိုအပ်သောကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများနှင့်အရင်းအမြစ်များပါဝင်သည်။ သငျသညျရှေ့လူအစုအဝေးနှင့်စီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်ကွက်များ၏ရွှေ့ဖို့ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက် MetaTrader လည်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် programming language ကိုပြည့်စုံထားပါတယ် - MQL4မိမိတို့အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်စက်ရုပ် program မှကုန်သည်များအားဖွင့်။
အခုတော့ကို Download လုပ် ပိုမိုသိရှိရန် အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
Forex ကုန်သွယ်များအတွက်ကိရိယာများ၏အကျယ်ဆုံးအကွာအဝေး Offfers ။
အဆိုပါ MetaTrader4မိုဘိုင်း App ကို Android နှင့် iPhone ကို powered မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်အပြည့်အဝ configured နှင့်ပြည့်စုံကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကထူးခြားတဲ့လျှောက်လွှာကုန်သည်များကုန်သည်များ '' စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်အရစ်ကျကုမ္ပဏီများမှရာပေါင်းများစွာထဲကနေရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုကုန်သည်များကအောင်မြင်သော Forex ကုန်သွယ်များအတွက် enable လုပ်ဖို့လိုအပ်သမျှကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပလက်ဖောင်းသို့ embedded ဖြစ်ပါသည်: ပြီးပြည့်စုံအမိန့်များအစု, ကုန်သွယ်ရေးသမိုင်း, အပြန်အလှန်ဇယား, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ထောက်ခံမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ၏အကျယ်ဆုံးရွေးချယ်ရေး။
အဆိုပါ MetaTrader4မိုဘိုင်း App ကိုသုံးပြီးကုန်သည်ကြီးများအချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာကုန်သွယ် Forex များအတွက်အစွမ်းထက်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပျော်မွေ့။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကုန်သွယ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုတစ်ခုလုံးကိုစာကြည့်တိုက်ကမိုဘိုင်း device များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
MetaTrader4features တွေနှင့်အတူမိုဘိုင်းကုန်သွယ်
တစ်ဦးကုန်သွယ်အကောင့်ကျော် complete ထိန်းချုပ်မှု
ဘယ်နေရာမှာမဆို 24 /5ထံမှထရေးဒင်း
ဇယား၏3အမျိုးအစားများ: အရက်ဆိုင်, ဂျပန်မီးခွက်နှင့်ကျိုးလိုင်း
9 အချိန်ပြကွက်: တစ်မိနစ်ကနေတစ်လမှ
အခမဲ့မိုဘိုင်း chat နဲ့အီးမေးလ်က
ဒါကြောင့်အပေါ်ကိုရယူပါGoogle Play စ ပေါ်ရရှိနိုင်အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး ပိုမိုသိရှိရန် အန်းဒရွိုက်အသုံးပြုသူလမ်းညွှန် iOS ကအသုံးပြုသူလမ်းညွှန်
MetaTraderပေါင်းစုံ terminal ကို
2006 အတွက်ဖြန့်ချိခြင်း, MetaTrader4MultiTerminal အဆိုပါ MetaTrader4အွန်လိုင်းထရေးဒင်းပလက်ဖောင်းတစ်ဦးသည်ယခုအခါတစ်ဦးလေးစားခြင်းနှင့်လေးစားအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ MultiTerminal မျိုးစုံအကောင့်အသစ်များ၏တစ်ပြိုင်နက်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ဤသည်ရန်ပုံငွေများကိုစီမံခန့်ခွဲသူများသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ '' အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲသောသူတို့အဘို့နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အများအပြားအကောင့်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကုန်သည်များများအတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောစက်ရုံနှင့်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ MT4 MultiTerminal အောင်မြင်စွာအများအပြားအကောင့်အသစ်များ၏နှင့်ခြွင်းချက်အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်နှင့်အတူထိရောက်သောကုန်သွယ်ပေါင်းစပ်ကြောင်းဈေးကွက်ဦးဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပေါင်းစပ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကို interface တွင် MetaTrader4လိုင်း Terminal နှင့်များ၏ဆင်တူသည်။ ဒါဟာ MetaTrader4လိုင်း Terminal နှင့် အသုံးပြု. နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မဆိုကုန်သည်, အလွယ်တကူလျင်မြန်စွာနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရနိုငျကွောငျး, အလွန်ရိုးရှင်းပြီးဆန်းသစ်နှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
MetaFX အဖြစ်လူသိများစီးပွားဖြစ်ပွဲစားဆော့ဖ်ဝဲ application ကိုထောက်ပံ့ပေး ပေးခဲ့သည် (Multi အကောင့် Manager က) ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များအဘို့ကုန်သွယ်အကောင့်ရန်ပုံငွေများနိုင်ခဲ့သည်။ ပေးခဲ့သည်, စီမံခန့်ခွဲအကောင့်အသစ်များ၏ဆိုငွေပမာဏကိုအတူလုပ်ကိုင်ခေတ်မီခွဲဝေနည်းလမ်းများသုံးပြီးတဲ့ Expert Advisors အကြံပေးအဖွဲ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ပိုပြီးခွင့်ပြုပါတယ်။ ကိုယ့်အချို့အင်္ဂါရပ်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များပါဝင်သည်:
ဆာဗာဘေးထွက် plugin ကိုချက်ချင်းသေဒဏ်စီရင်ဖန်တီး
Tradestation အချက်ပြမှုများ MT ပလက်ဖောင်း (သီးခြား module တစ်ခု) တွင်ကုန်သွယ်ခြင်းကိုအားခွင့်ပြု